The itinyekwu Hackers Cookbook - Foneelu Of The Day
The itinyekwu Hackers Cookbook bụ otu n'ime ndị isi na àjà na Clickfunnels website.
... Ma ụzọ Russell Brunson enye mmalite na funnels ụwa.
The akwụkwọ na-enye nzọụkwụ-site-nzọụkwụ nkọwa iwu funnels ka ndị na-amaghị otú ha na-arụ ọrụ. Ọ na-enye gị a rundown na funnels i nwere ike iru ma ọ bụrụ na ị na-adịghị nwere echiche ọ bụla nke ihe na-eme.
The akwụkwọ na-arụ ọrụ dị ka a ekele na ndu ka ndị ọzọ niile na akwụkwọ site na ụlọ ọrụ.
Ọ bụrụ na ị na-abụ abụ ka clickfunnels website, Nke a bụ isi ndu nke ga-enyere ị na-eme ihe kasị mma nke gị nleta mbụ na otú ndokwa ntọala maka gị ọrụ.
Nke a bụ ihe ị chọrọ ime ugbu a na-esi gị oyiri: Pịa ebe a
Na-ekwu na gị free oyiri nke CookBook, na-agwa thezm ebe izipu ya (e nwere ihe a obere mbupu ego, ma ịtụkwasị m obi…ọ bụ a ọmarịcha akwụkwọ na maa kwesịrị enwe anụ ahụ oyiri)
Akwụkwọ a bụ dị ka 10 afọ nke foneelu-ụlọ ihe ọmụma, niile neatly weere n'ime mfe na-ịghọta Ezi ntụziaka.